5 Mose 32 ASCB - Matej 32 CRO
1Monyɛ aso, Ao ɔsoro na mɛkasa!
Tie, Ao asase, nsɛm a ɛfiri mʼanom.
2Me nkyerɛkyerɛ bɛtɔ agu mo so sɛ nsuo;
me kasa bɛgu sɛ obosuo.
Me nsɛm bɛtɔ sɛ osuo a ɛgu ɛserɛ foforɔ so,
te sɛ nsuo a ɛpete afifideɛ foforɔ so.
3Mɛbɔ Awurade din;
Animuonyam wɔ yɛn Onyankopɔn.
4Ɔyɛ Ɔbotan; nʼadwuma yɛ pɛ;
Biribiara a ɔyɛ nam ne kwan so, na ɛyɛ.
Ɔyɛ Onyankopɔn nokwafoɔ a ɔnyɛ mfomsoɔ;
Ɔteneneeni ne nokwafoɔ ne no.
5Nanso wɔayɛ amumuyɛsɛm atia no;
sɛ wɔyɛ saa a, na wɔyɛ ne mma anaa?
Wɔyɛ adaadaafoɔ ne nkyirimma kɔntɔnkye.
6Saa na ɛsɛ sɛ mo ne Awurade di no?
Mo nkwaseafoɔ ne adwenemherɛfoɔ.
Ɛnyɛ ɔno ne mo Agya, mo yɛfoɔ?
Ɛnyɛ ɔno na ɔbɔɔ mo na ɔmaa mo nnyinasoɔ?
7Monkae tete nna;
monnwene awoɔ ntoatoasoɔ a atwam ho.
Mommisa mo agya na ɔbɛkyerɛ mo.
Mommisa mo mpanimfoɔ na wɔbɛka akyerɛ mo.
8Ɛberɛ a Ɔsorosoroni kyekyɛɛ nsase maa amanaman,
na ɔkyekyɛɛ adasamma mu no,
ɔtotoo ahyeɛ maa nnipa no
sɛdeɛ Israelfoɔ no ano sie.
9Ɛfiri sɛ, Israelfoɔ yɛ Awurade dea;
Yakob yɛ nʼagyapadeɛ sononko.
10Ɔhunuu wɔn wɔ ɛserɛ asase so
Asase kesee a hwee nni so so.
Ɔtwaa wɔn ho hyiaeɛ, hwɛɛ wɔn so;
Wɛn wɔn sɛ nʼagyapadeɛ a ɛsom bo.
11Sɛdeɛ ɔkɔdeɛ hwanyan ne mma,
na ɔbɔ mpɛmpɛn fa wɔn ho,
saa ara na ɔtrɛɛ ne ntaban mu bumaa wɔn,
sɔɔ wɔn mu den de wɔn tu kɔɔ soro.
12Awurade nko na ɔkyerɛ wɔn ɛkwan.
Wɔtenaa ase a wɔnni ananafoɔ anyame biara.
13Ɔma wɔnante faa nkokoɔ so;
Ɔma wɔdi mfuo so nnɔbaeɛ;
ɔde abotan mu woɔ,
ne ngo a ɛfiri abohemaa mu siesie wɔn.
14Ɔde anantwie nufosuo mu sradeɛ ne nnwan nufosuo,
nnwan ne mmirekyie mu sradeɛ ma wɔdiiɛ.
Ɔde Basan nnwennini ne nnwan a wɔadɔre,
ne atokoɔ papa maa wɔn.
Monom bobesa papa a ɛfiri bobe mu.
15Nanso, ankyɛre Yeshurun dɔree sradeɛ yɛɛ ahomasoɔ;
nnipa no mu yɛɛ duru, yɛɛ abrane, yɛɛ pemee!
Afei, wɔpaa Onyankopɔn a ɔbɔɔ wɔn;
wɔammu wɔn Botan a ɔyɛ wɔn nkwagyeɛ no.
16Wɔkanyane ne ninkunutwe, ɛfiri sɛ wɔsomm anyame foforɔ;
wɔyɛɛ akyiwadeɛ pii de hyɛɛ no abufuo.
17Wɔbɔɔ afɔdeɛ maa ahonhom fi, anyame huhuo,
anyame a na wɔnnim wɔn dada,
anyame a wɔbaa nnansa yi ara,
anyame a na wɔn agyanom nsuro wɔn.
18Mopaa Ɔbotan a ɔyɛɛ mo agya no.
Mo werɛ firii Onyankopɔn a ɔwoo mo no.
19Awurade hunuu yei na wɔn ho yɛɛ no nwunu.
Ɔno ankasa mmammarima ne ne mmammaa hyɛɛ no abufuo.
20Ɔkaa sɛ, “Mɛgya wɔn hɔ;
Mɛma wɔn awieeɛ aba!
Ɛfiri sɛ, wɔyɛ awoɔ ntoatoasoɔ kɔntɔnkye;
mma a wɔnni nokorɛ.
21Wɔde anyame foforɔ som akanyane me ninkuntwe;
wɔde anyame huhuo ahyɛ me abufuo.
Afei, mɛhyira aman a wɔnyɛ me ɔman mpo ama wɔn ani abere;
mɛhyira aman amanmufoɔ a wɔnni nteaseɛ ahyɛ wɔn abufuo.
22Mʼabufuo dɛre sɛ ogya,
na ɛhye kɔsi damena mu.
Ɛsɛe asase ne so nnɔbaeɛ nyinaa
na ɛpaapae mmepɔ fapem.
23“Mɛhɔre amanehunu wɔ wɔn so
na mato me bɛmma awowɔ wɔn.
24Mede ɛkɔm kɛseɛ,
huraeɛnini ne owuyadeɛ bɛba wɔn so.
Wɔde wiram mmoa se
ne awɔ a wɔn ano wɔ borɔ a wɔwea fam bɛha wɔn.
25Mmɔntene so no wɔbɛwuwu akofena ano,
na afie mu, ehu bɛtɔ wɔn so.
Mmeranteɛ ne mmabaawa
mmɔfra ne mpanin nyinaa.
26Meyɛɛ mʼadwene sɛ mɛbɔ wɔn ahwete
ama wɔn nkaeɛ ayera.
27Nanso, mesuroo ɔtamfoɔ fɛdie,
sɛ ebia atiafoɔ rente aseɛ na wɔaka sɛ,
‘Yɛn tumi adi nkonim!
Ɛnyɛ Awurade na ɔyɛeɛ!’ ”
28Israel yɛ ɔman a wɔnni adwene.
Nnipa no yɛ nkwaseafoɔ, na wɔnni nteaseɛ.
29Ao, sɛ wɔnim nyansa a, anka wɔbɛte yei ase!
Ao, anka wɔbɛhunu wɔn hyɛberɛ!
30Ɛbɛyɛ dɛn na onipa baako ataa nnipa apem,
na baanu bɛma ɔpedu adwane,
gye sɛ wɔn Botan atɔn wɔn.
Gye sɛ Awurade ayi wɔn ama.
31Na wɔn botan nte sɛ yɛn Botan,
sɛdeɛ wɔhunu no.
32Wɔn bobe nyini firi Sodom bobe mu
firi Gomora bobe nturom.
Wɔn bobe aba yɛ awuduro
na wɔn siaka nso yɛ nwono.
33Wɔn bobesa yɛ awɔ ano borɔ;
aprammire ano borɔ kɔdiawuo.
34“Merekora saa nneɛma yi nyinaa,
asɔ ano de asie mʼadekoradan mu.
35Mɛtɔ awere; wɔn a ɛfata wɔn no, ɛbɛtua wɔn so ka.
Ɛrenkyɛre wɔn nan bɛwatiri.
Wɔn amanehunu da no bɛduru,
na wɔn hyɛberɛ bɛto wɔn.”
36Awurade bɛbu ne nkurɔfoɔ atɛn
na wasesa nʼadwene wɔ ne nkoa ho,
Ɛberɛ a wahunu sɛ wɔn ahoɔden asa,
na ɛnkaa obiara, akoa anaa ɔdehyeɛ.
37Ɔbɛbisa sɛ, “Afei wɔn anyame no wɔ he,
ɔbotan a wɔde yɛɛ wɔn dwanekɔbea no,
38anyame a wɔdii wɔn afɔrebɔdeɛ mu sradeɛ no
na wɔnom wɔn afɔrebɔdeɛ mu nsã no?
Ma saa anyame no nsɔre mmɛboa mo!
Ma wɔnyɛ mo dwanekɔbea!
39“Afei, monhunu sɛ, me ara me ne no!
Onyame biara nni hɔ sɛ me!
Me na mekum na mema nkwa:
Me na mepira, na mesa;
obi ntumi nnye wo mfiri me nsam.
40Afei, mepagya me nsa kyerɛ soro
Ka sɛ: Sɛ mete ase yi,
41Sɛ mese mʼakofena a ɛpa yerɛ yerɛ ano
na mefiri atemmuo ase a,
mɛtɔ mʼatamfoɔ so awere
na matua wɔn a wɔtan me so ka.
42Mɛma me bɛmma anom mogya abo,
na mʼakofena asɛe honam,
atɔfoɔ ne nnommumfoɔ mogya,
ne atamfoɔ ntuanofoɔ tiri.”
43Ao ɔsorosoro, mo ne no nni ahurisie,
ɛfiri sɛ, ɔbɛtɔ nʼasomfoɔ mogya so were.
Ɔbɛtɔ nʼatamfoɔ so awere
na wadwira nʼasase ne ne nkurɔfoɔ ho.
44Mose ne Nun babarima Hosea baeɛ bɛkaa dwom yi mu nsɛm nyinaa kyerɛɛ nnipa no. 45Mose wiee saa dwom no mu nsɛm no ka no, 46ɔka kaa ho sɛ, “Momfa nsɛm a maka akyerɛ mo no nyinaa nsie mo akoma mu. Monka nkyerɛ mo mma nso sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛdi emu asɛm biara so sɛ mmara. 47Saa nkyerɛkyerɛ yi nyɛ nsɛm bi kwa, ɛyɛ mo nkwa! Sɛ modi so a, mo nkwa nna bɛware wɔ asase a moretwa Asubɔnten Yordan akɔtena so no so.”
48Ɛda no ara, Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, 49“Kɔ Moab, kɔ mmepɔ a ɛwɔ asuo no apueeɛ no so, na foro Nebo bepɔ a ɛne Yeriko di nhwɛanim no. To wʼani hwɛ Kanaan asase no, asase a mede rema Israelfoɔ sɛ wɔn agyapadeɛ no. 50Ɛhɔ na wobɛwu wɔ bepɔ no so, na woakɔka wʼagyanom ho, sɛdeɛ wo nua Aaron wuu wɔ Hor bepɔ so kɔkaa nʼagyanom ho no. 51Ɛfiri sɛ, mo baanu dii me hwammɔ wɔ Israelfoɔ mu wɔ Meriba ne Kades asuo ho wɔ Sin ɛserɛ so. Moanni me kronkronyɛ ho adanseɛ ankyerɛ Israelfoɔ no wɔ hɔ. 52Ɛno enti, mobɛhunu asase no afiri akyiri, nanso mo nan rensi asase a mede rema Israelfoɔ no so.”
ASCB : 5 Mose 32